Tag: ngwaahịa reviews | Martech Zone
Tag: nyocha ngwaahịa
Onwere ogugu 542 di iche iche na Amazon… sitere na onu ahia site na $ 5.57 rue $ 384.23. Ndị na-adịghị ọnụ ọnụ hanga banana bụ nko dị mfe ị na-arịgo n'okpuru kabinet gị. Osisi banana kachasị oke ọnụ bụ ọmarịcha banana nke Chabatree a na-eji aka ya rụọ ma mee nke osisi na-adigide. Serkè… M lere ha anya. Agụrụ m nsonaazụ ndị ahụ, were ha dị ọnụ ahịa, wee mee ọtụtụ nyocha nke banana. Right now (na na na)
Wednesday, April 15, 2020 Tọzdee, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ na nke ahụ dị ka ekweghị ekwe, ọ bụghị. Enyi m nwanyị bụ ọkachamara na ịhịa aka n'ahụ na ịhịa aka n'ahụ na Fishers, Indiana. M ga-ewu ya saịtị na ọnwa ole na ole gara aga, mana enweghị ike n'ihi ọrụ ndị ahịa nke butere ụzọ. Ọsọ ọsọ na-emechi emechi na ọtụtụ ọrụ ahụ gara n'okporo ụzọ mgbe ndị ahịa m kwụsịtụrụ atụmatụ ma ọ bụ gbanwee ihe ndị ka mkpa iji wee merie mfu ego. Ọ bụrụ na m ga-ewu saịtị na
Syndication bụ ụzọ dị oke mma maka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị iji bulie olu nke ngwaahịa na nyocha (nyocha) ha gosipụtara. Dị, nke mbụ na-anakọta onye ọrụ a bara uru mepụtara ọdịnaya (UGC), na-anụ ọkụ n'obi maka ndị na-ere ahịa ka ha gosipụta ndị a na saịtị eCommerce ha. Site na ikerita ihe nlere ha na ndi ha na ha n’enye ekesara, udiri aka ha nwere ike nyere aka mee ka ngwa ahia ha puta ma rekwaa nke oma, ka egosiputara mpio di elu ka ha bawanye ahia. Ruo ugbu a, ụdị nkwupụta ahụ
Anyị na onye ahịa anyị na-ekwu okwu n’oge na-adịbeghị anya banyere iji igwe na-elekọta mmadụ na-eme ihe na-adịghị mma ma enwere m nsogbu. Ha jiri obi eziokwu chee na ọ bụ igbu oge, na ha enweghị ike nweta nsonaazụ azụmaahịa ebe ndị ahịa ha kwụ na Facebook na saịtị ndị ọzọ. Ọ na-agbagha na nke a ka bụ nkwenye zuru oke site na azụmaahịa mgbe afọ iri nke ịmụ otu esi etinye usoro na ngwa ọrụ